သတင်းပဒေသာ | MoeMaKa Burmese News & Media | Page 86
မိုးမခအထောက်တော် ရန်ကုန်၊ မေ ၂၂၊ ၂၀၁၂ မန္တလေးတွင် ဖယောင်းတိုင်များထွန်းညှိပြီး လျှပ်စစ်မီးရရှိရေး လူထုဆန္ဒထုတ်ဖော်ကြသကဲ့သို့ ရန်ကုန်မြိ့တော်တွင်လည်း လျှပ်စစ်မီးရရှိရေးဆန္ဒထုတ်ဖော်မှုများ ပြုလုပ်ကြရန် ပြင်ဆင်နေပြီဟု သိရသည်။ ယနေ့ ညနေ ၆ နာရီခွဲတွင် ရန်ကုန်မြို့တော်၊ ဆူးလေဘုရားလမ်း၊ လက်ရွေးစင် လဘက်ရည်ဆိုင်ရှေ့တွင် စုဝေးပြီး ညနေ ၇ နာရီတွင် မြို့တော်ခန်းမသို့ ချီတက်ကြမည်ဟု သတင်းများ ထွက်ပေါ်နေသည်ဟု ဆိုသည်။ အစုိုးရသတင်းစာများတွင် မြန်မာပြည်တွင်း လျှပ်စစ်မီးလုံလောက်စွာ ဖြန့်ဝေပေးခြင်း မပြုနိုင်ခြင်းမှာ နွေရာသီအတွင်း မိုးရေနှင့် ဆည်ရေရှားပါးခြင်း၊ စားသုံးမှု မြင့်တင်ခြင်းတို့ကြောင့် ဖြစ်ကြောင်း ဖြေရှင်းချက် ထုတ်ပြန်ထားသည်ကို တွေ့ရသည်။ မန္တလေးတွင် အစုိုးရ၏ အထူးလုံခြုံရေးတပ်ဖွဲ့ဝင်များက ဆန္ဒထုတ်ဖော်သူများအနက်မှ ထင်ရှားသူများ၊...
YPI News – လျှပ်စစ်မီးရရှိရေး ဆန္ဒထုတ်ဖေါ်သူများ ရဲသတင်းတပ်ဖွဲ့မှ ခေါ်ယူစစ်ဆေးနေ Yangon Press International – နံနက် ၁၀နာရီခွဲ၊ မေလ ၂၂ ရက်၊ ၂၀၁၂ ခုနှစ် မန္တလေးမြို့၌ မေလ ၂၀ ရက်နေ့နှင့် ၂၁ ရက်နေ့ညများက လျှပ်စစ်မီးရရှိရေးအတွက် ဖယောင်းတိုင်များဖြင့် ဆန္ဒထုတ်ဖေါ်ခဲ့သူများထဲမှ ဦးဆောင်သူ ၁၉ ဦးကို ရဲသတင်းတပ်ဖွဲ့က ယနေ့နံနက် ၆ နာရီမှ ခေါ်ယူစစ်ဆေးလျှက်ရှိရာ သတင်းရရှိချိန် နံနက် ၁၀ နာရီထိ ပြန်မလာသေးကြောင်း ခေါ်ယူခံရသူ၏ မိတ်ဆွေတဦးက ပြောသည်။ ၎င်းက “မနက်စောစောပိုင်းက လာခေါ်သွားတာ၊ မနေ့ညက ခင်ဗျားတို့ လုပ်ခဲ့တဲ့ ဆန္ဒပြတဲ့ကိစ္စနဲ့ ပတ်သက်လို့ မေးချင်တာတွေရှိလို့ပါ ခဏလေးပါ” ဟု...
မိုးမခအထောက်တော် ၀၀၂၊ မေ ၂၂၊ ၂၀၁၂ ဆန်ဖရန်ဘေးဧရိယာအခြေစိုက် မြန်မာမိသားစုများ၏ အားပေးကူညီမှုဖြင့် ဆောင်ရွက်နေသည့် San Francisco Burmese Community Book Drive က ၂၀၁၂ နှစ်ဦးပိုင်း စာအုပ်အလှူများအဖြစ် ရန်ကုန်မြို့ရှိ လူ့ဘောင်သစ်စာကြည့်ခန်း နှင့် ကချင်ပြည်နယ်ရှိ ပရဟိတစာသင်ကျောင်းတို့သို့ ကလေးစာအုပ်များ ပေးပို့လှူဒါန်းခဲ့သည်။ တာမွေမြို့နယ်တွင် ဖွင့်လှစ်ထားသည့် လူ့ဘောင်သစ်စာကြည့်တိုက်တွင် လိုအပ်နေသည့် ကလေးစာအုပ်များကို ၂၀၁၂ ဧပြီလတွင်၎င်း၊ ကချင်ပြည်နယ်တွင် ဖွင့်လှစ်ထားသော ပရဟိတစာသင်ကျောင်းက ကလေးများအတွက် ၂၀၁၂ မေလတွင်၎င်း စာအုပ် တသေတ္တာဆီ ပေးအပ်ခဲ့သည်ဟု ဆိုသည်။ ကချင်ပြည်နယ်က တိုင်းရင်းသားအမျိုးသမီးခေါင်းဆောင် တဦးဖြစ်သော ဒေါ်ဘောက်ဂျာက အဆိုပါကလေးစာအုပ်များကို လက်ခံရယူခဲ့သည်ကို တွေ့ရသည်။ လက်ရှိ ရောက်ရှိနေသည့် စာအုပ်သေတ္တာများထဲမှ နာရေးကူညီမှုအသင်း၏...
မိုးမခအထောက်တော် ၀၀၆၊ မေ ၂၀၊ ၂၀၁၂ အမေရိကန်နဲ့ ကမ္ဘာတ၀ှမ်းမှာ ပရိသတ်အများဆုံးကို လွှမ်းမိုးထားတဲ့ အင်တာနက် လူမှုကွန်ယက် Facebook ထူထောင်သူ မတ်ဇူကာဘတ်တယောက် တနေ့က အသက် ၂၈ နှစ်ပြည့်၊ သူ့ကုမ္မဏီကို အဲသည်နေ့မှာ အများပိုင်ရှယ်ယာလုပ်ငန်းအဖြစ် ထုတ်ရောင်းပြီး ဘီလျံနာဖြစ်၊ နောက်တရက် မေ ၁၉ မှာတော့ဖြင့် သူရဲ့ ၈ နှစ်တာ လက်တွဲခဲ့သူ ရည်းစား ပရက်စီလာ ဆိုတဲ့ အာရှနွယ်အမျိုးသမီးနဲ့ မင်္ဂလာဆောင်လိုက်ပြီ ဖြစ်ပါတယ်။ ဟားဗတ်တက္ကသိုလ်မှာ ဖေ့စ်ဘွတ်မထောင်ခင်ကတည်းက ချစ်ကြိုက်ခဲ့ပြီး ယူစီဆန်ဖရန် တက္ကသိုလ်မှာ ဆရာဝန်ဘွဲ့ ဆက်လက်ယူနေသူ ပရက်စီလာနဲ့ အခုလို မင်္ဂလာပေါင်းတွေ ပေါင်းစုံတဲ့နေ့မှာ လက်ထပ်ခဲ့တာ ဖြစ်ပါတယ်။ ပရက်စီလာကိုယ်တိုင်ကလည်း သောကြာနေ့မှာ ဘွဲ့နှင်းသဘင်တက်ခဲ့တာလို့ ဆိုပါတယ်။...
မိုးမခအထောက်တော် အမှတ် ၀၀၉ မေ ၁၈၊ ၂၀၁၂ နယူးယောက်မြို့ အီလက်ထရွန်နစ် စတော့ဈေးကွက် NASDAQ ၏ ယမန်နေ့က မြင်ကွင်း (ဓာတ်ပုံ – Getty Images) No tags for this post.
မိုးမခအထောက်တော် အမှတ် ၀၀၇ မေ ၁၈၊ ၂၀၁၂ (Reuters photo) မကြာသေးခင် လများအတွင်း စင်္ကာပူတွင် နှလုံးခုန်စက် သွားရောက် တပ်ဆင်ခဲ့ရသော ဦးသိန်းစိန် သမ္မတဦးသိန်းစိန်သည် စစ်တပ်ဆရာဝန်တဦးအား ရန်ကုန်မြို့နေအိမ်သို့ ခေါ်ယူကာ ကုသမှု ခံယူပြီးနောက် အနားယူနေသည်ဟု သိရသည်။ No tags for this post.
သတင်းဌာနများ သတင်းကောက်နုတ်ချက်၊ မိုးမခ၊ မေ ၁၈၊ ၂၀၁၂ ယမန်နေ့က အမေရိကန်ပြည်ထောင်စု၏ အိုဘားမားအစုိုးရက မြန်မာပြည်အစိုးရကို ပ်ိတ်ဆို့အရေးယူမှုသက်တမ်း တနှစ်ဆက်တိုးလိုက်သည်။ သို့သော်လည်း စီးပွားရေး ရင်းနှီးမြုပ်နှံမှုများကို ယာယီကင်းလွတ်ခွင့်ပြုလုိုက်သည်ဟု ဆိုသည်။ လက်နက်ရောင်းချမှု ပိတ်ဆို့ခြင်းတို့ကို ဆက်လက်ထားရှိမည်ဖြစ်ပြီး လူ့အခွင့်အရေးချိုးဖောက်သူ အာဏာရှင်နှင့် အပေါင်းအပါများ မိသားစုများအပေါ်ငွေကြေးပိတ်ဆို့ခြင်းကို ပြန်လည် စိစစ်မည်ဟု သတင်းစာများတွင် ဖော်ပြထားသည်။ အမေရိကန်အခြေစိုက် လူ့အခွင့်အရေးလှုပ်ရှားသူအဖွဲ့အစည်းများနှင့် မြန်မာ့အရေးလှုပ်ရှားသူများက အမေရိကန်အစုိုးရ၏ ခြေလှမ်းကို ဝေဖန်ကြသည်ဟု ဆိုသည်။ အမေရိကန်အစိုးရကမူ မြန်မာပြည်တွင်းစစ်ရပ်ဆိုင်းရေး၊ နိုင်ငံရေးအကျဉ်းသားများ လွတ်မြောက်ရေးနှင့်တကွ မြန်မာပြည်ဒီမုိုကရေစီဖော်ဆောင်ရေးအတွက် ဆက်လက် တိုက်တွန်း နှိုးဆော်သွားမည်ဟု ပြန်ကြားသည်။ အမေရိကန်က မြန်မာပြည်အတွက် သံအမတ်အဆင့် ကိုယ်စားလှယ်တိုးမြှင့်ခံ့ထားလိုက်ပြီး မြန်မာပြည်သို့ အမေရိကန်ကုန်သည်ကြီးများအသင်းမှ ကိုယ်စားလှယ်များကလည်း လေ့လာရေး ရောက်ရှိနေပြီ ဖြစ်သည်။ ဘဏ်၊ ငွေကြေးနှင့် ကုန်သွယ်ရေး...
ဘကျော်(မကွေး)၊ မိုးမခ၊ မေ ၁၈၊ ၂၀၁၂ မကွေးမြို့၊ ညောင်ကန်တိုက်နယ်၊ ညောင်ပင်ရွာကျေးရွာရှိ ဧက ၂၀ ရှိ ရေကန် တာဘောင်ရိုးပြုပြင်ခြင်းလုပ်ငန်းကို အများပြည်သူတို့၏ အလှူငွေဖြင့် အပြီးသတ် ဆောက်လုပ်ပြီးစီးတော့မည် ဖြစ်ကြောင်း သိရသည်။ မူလ ကြားဖြတ်ရွေးကောက်ပွဲမတိုင်မီက ကြံ့ဖွံ့ပါတီက အကုန်ကျခံပြီး ပြုလုပ်ပေးမည်ဟု မဲဆွဲခဲ့သည်။ ပြုပြင်ရေးလုပ်ငန်းများကို သိန်း ၂၀ ကျပ်ဖိုးအကုန်ခံပြီး စတင်ခဲ့သော်လည်း ကြားဖြတ်ရွေးကောက်ပွဲတွင် သူတို့ပါတီရှုံးနိမ့်သဖြင့် ပြုပြင်ရေးလုပ်ငန်းကို ရပ်ဆိုင်းခဲ့သည်ဟု ဆိုသည်။ ရေကန်တာရိုးကို မိုးမကျခင် အချိန်မီ ပြုပြင်တည်ဆောက်ရန်လိုအပ်သဖြင့် ကျေးရွာလူထုက ဆက်လက်အလှူခံပြီး ကြိုးပမ်းခဲ့ကြရာတွင် စုပေါင်းကုန်ကျငွေ ၈၀ သိန်း ကျပ်ဖိုးတွင် နာရေးကူညီမှုအသင်း (ရန်ကုန်)က အလှူငွေ ကျပ် သိန်း ၄၀ လှူဒါန်းထည့်ဝင်ခဲ့သည်။...
by Yangon Press International on Wednesday, 16 May 2012 at 09:41 · မေလ ၁၆ ရက်၊ ၂၀၁၂ ခုနှစ်- (YPI) ရန်ကုန်မြို့တနေရာတွင် တွေ့ရသော ရဲတပ်သားများ (photo – AFP) ရန်ကုန်တိုင်း၊ မင်္ဂလာဒုံမြို့နယ်၊ ပတ္တမြားမြို့သစ်အနီးတွင် တပ်စွဲထားသော အမှတ် (၈) ရဲတပ်ရင်းမှ ရဲတပ်သားများသည် ယနေ့ ည ၇ နာရီခွဲခန့်တွင် ပတ္တမြားမြို့သစ်၊ အောင်စည်တော် လက်ဘက်ရည်ဆိုင်သို့ ၀င်ရောက်ပြီး ရပ်ကွက်နေလူငယ်များအား ရိုက်နှက်ခဲ့ကြောင်း ရပ်ကွက်နေပြည်သူများက ပြောသည်။ထိုသို့ရိုက်နှက်မှုကြောင့် ယင်းလက်ဘက်ရည်ဆိုင်တွင်ထိုင်နေသော လူငယ် ၁၀ ဦးခန့်ဖူးယောင်ဒဏ်ရာရခဲ့ပြီး တစ်ဦးမှာ ဦးခေါင်းပေါက်ပြဲ ဒဏ်ရာရခဲ့ကြောင်း ရိုက်နှက်ခံရသူလူငယ်တစ်ဦးဖြစ်သည့် ရဲထူးဇော်ကပြောသည်။ ” သားတို့က လက်ဘက်ရည်ဆိုင်မှာ...
ဘကျော် (မကွေး)၊ မေ ၁၆၊ ၂၀၁၂ မကွေးမြိ့၊ နတ်မောင်လမ်း၊ ကန်ပြား အရှေ့စုရပ်မှာ ဦးဇော်ဝင်းမိသားစု ထူုထောင်ထားတဲ့ ဘော်ဒါဆောင် (ကျောင်းအိပ်၊ ကျောင်းစား၊ ကျုရှင်လုပ်ငန်း)ကို လုပ်ငန်းလိုင်စင် လုပ်ပိုင်ခွင့် ချမပေးဘူးလို့ သိရပါတယ်။ ဦးဇော်ဝင်းက အင်န်အယ်ဒီပါတီဝင်တဦး ဖြစ်နေတဲ့အတွက် ပါတီနိုင်ငံရေးကင်းရှင်းမှု မရှိလို့ ဘော်ဒါဆောင်လုပ်ငန်းလုပ်ခွင့် မရှိဟု အာဏာပိုင်တို့က ဆိုပါတယ်။ “အယင်နှစ်တွေက သမီးနံမယ်နဲ့ ဘော်ဒါဆောင်လုပ်ငန်းကို မှတ်ပုံတင်ပြီး လုပ်ခဲ့တယ်။ နောက်တော့ သမီးက ပြည်ပခရီးထွက်သွားတော့ ဇနီးအမည်နဲ့ ဘော်ဒါဆောင်လိုင်စင်ကို ဆက်လုပ်တယ်။ အခုနှစ်ကျမှ အမျိုးသားနံမယ်နဲ့ လုပ်ငန်းလိုင်စင်တင်တယ်။ အုပ်ချုပ်ရေးက သိတာက ကိုဇော်ဝင်းက အင်န်အယ်ဒီ။ ဒီတော့ သူ့ကို လိုင်စင်ချမပေးဘူး။ ပြည်ခိုင်ဖြိုးပါတီဝင်တွေရဲ့ ဘော်ဒါဆောင်လုပ်ငန်းတွေကတော့ ဒါတွေ မလိုဘူး။ အကုန်လုပ်လို့ရတယ်။”...
Page 86 of 97«1...8485868788...97»